Nitrangana lozam-pifamoivoizana indray teny amin’ny RN2 tao amin’ny toerana antsoina hoe Ambavaniasy, omaly. Mpitondra moto iray maty tsy tra-drano nifandona tamin’ny kamiaobe iray. Nandriaka eran’ny arabe ny ra raha potipotika tsy nisy noraisina tao ambany kodiaran’ny fiara kosa ny moton’ilay niharam-boina.
Teratany vahiny iray 67 taona namoy ny ainy tao Ambalavato Mahajanga, omaly. Araka ny fanazavana voaray avy any an-toerana, nanana olana vola izy ka nahatonga azy namoy fo toy izao satria nisy olana ny kaontiny tany amin’ny banky. Efa nivezivezy tany amin’ny kaonsily any an-toerana izy, saingy tsy nisy vokany izany ka izao namoy fo izao ary niafara tamin’ny ainy.
Voatery nentina nihazo ny hopitalin’i Mahajanga ny lehilahy iray voatifitry ny dahalo sy ny ankizivavy iray naolan’ireo dahalo nandritra ny fanafihana nitranga tany Soalala. Nentin’ny fiaramanidin’ny Tafika izy ka tonga soa aman-tsara ao Mahanjga afakomaly.